China Mvura base bepa chubhu yakakosha glue fekitori nevatengesi DESAY
Chitarisiko: Milky chena viscous emulsion
Solid zvemukati: ≥25%
Viscosity: 50 ~ 100s (yakavharwa 4 makapu, 25 ℃)
Nguva yekuparadza pepa fiber: Minute1 mineti
Pepa chubhu glue
Iyo inogadzirwa kubva kune polyvinyl doro, kaolin uye zvidiki zvigadzirwa.
1: Yakasimba yekutanga adhesion, inokurumidza kurapa nguva （nguva iyo glue yaoma). Mukati memaminetsi matatu kusvika ku5, iyo yekunamatira inogona kuve yakasimba zvakakwana kutyora kana yabvaruka zvine simba. mushure mekuwedzera glue inogona kuita kuti pepa chubhu riome, uye kudzivisa kumanikidza kwakanyanya.
2: Nekuti izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinosanganisira kaolin iyo mutengo unodhura chete 260 USD / tani, vagadziri vemapepa machubhu vane hombe yekuda kwayo.
Chitarisiko Milky chena mwenje yero
Kurapa nguva: maawa makumi maviri nemana
Pasherufu hupenyu mwedzi mitanhatu
Chechina, kukura kwekushandisa
1: Rudzi urwu rweglue runogona kushandiswa nekunyudza kana kupopera, rinoshandiswa mukugadzira tambo chubhu, pagoda chubhu, kemikari fiber chubhu, yekuisa chisimbiso tepi chubhu, bepa kona kudzivirirwa, nezvimwe.
2: Kana ukobvu hwepombi chubhu iri 3-8 mm, inogona kurapwa pane tembiricha yemukati. Kana pamusoro pe12 mm inoda ovhoni kuti ikurumidze kurapwa.
3: Iyi mhando yeglue inogona kushandiswa pane inokurumidza pagoda chubhu yekugadzira tambo.
1. Yepamusoro-inoshanda bepa chubhu glue chinhu chemvura-chakavakirwa, icho chakachengeteka kushandisa uye hachikonzere kusvibisa kwezvakatipoteredza.
2. Unyoro hunoputika nekukurumidza, uye mushure mekugadzira bepa repepa rine shrinkage yakaderera, deformation diki uye goho repamusoro.
3. Iyo yakasimba yezvinhu yakakura, iyo inoderedza zvakanyanya nguva yekuomesa uye kupfupisa iyo yekugadzira kutenderera;
4. Ipfupi yekutanga nguva yekunamatira, inokodzera kutanga makoji pakumhanya kwakasiyana, kuumba panguva imwe chete, kugadzirisa kugona uye kudzikisa kusimba kwevashandi;
5. Simba rakakwirira rekubatanidza: Simba rekumanikidza, kuramba mvura uye kupisa kwechando kwepombi chubhu inogadzirwa neiyi glue iri pamusoro pane iyo inogadzirwa nemamwe marudzi erabha!
6.Green uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: Iko kushandiswa kwenguva refu kwepepa tube clue haina kukuvadza kumuviri wemunhu, uye kugadzirwa kwechigadzirwa kunoenderana nematanho ekugadzira ebhizinesi;
7. Yakasimba kutonhora kuramba, yakanaka fluidity pa0 ℃, hapana gelation.
8. Kugadzikana kwakanaka kwekuchengetedza. Inochengeterwa pakamuri tembiricha kweinopfuura mwedzi mitatu pasina delamination kana kuora.
1. Inokodzera mhando dzakasiyana dzemapepa chubhu uye pepa chubhu yekugadzira mitsara, yaishandiswa kugadzira machubhu emapepa, mapepa epepa, machubhu emapepa, makani emapepa anoshandiswa mumakemikari fiber, pepermaking, mapurasitiki, kuputira, machira, kudhinda uye kudhiza maindasitiri;
2. Inokodzera mhando dzakasiyana dzemapepa ekudzivirira ekugadzira mitsara yekugadzira;
3. Inokodzera kugadzira akasiyana mapepa ekuchengetedza mapepa, huchi hwehomwe cores, bepa tireyi, nezvimwe.
4. Inokodzera yepamusoro-giredhi katoni uye makatoni ekugadzira mitsara;
5. Inokodzera akasiyana manyore uye otomatiki pagoda chubhu mechina machira coiling;
6, yakasanganiswa nemvura inogona kushandiswa pakufamba
Zvigadzirwa zvemvura-zvakachengeteka kushandisa uye hazvikonzere kusvibiswa kwezvakatipoteredza
Mvura volatilization inomhanya, kugadzirwa kwepepa chubhu shrinkage rate yakaderera, diki misiyano, yakakwira goho
Yakakura yakasimba yezvinyorwa, ichideredza zvakanyanya kuomesa nguva, kupfupisa iyo yekugadzira kutenderera
Yakasimba inotonhora kuramba, yakanaka fluidity pa0 0 mamiriro, hapana gelation
Kugadzikana kwakanaka kwekuchengetedza, tembiricha yekamuri yekuchengetedza kwemwedzi inopfuura mitatu, hapana stratification, hapana kuora
Yakakwira simba rekubatanidza: bepa chubhu inogadzirwa neiyi glue ine yakasimba simba yekumanikidza, kushorwa kwemvura uye chando kupokana pane izvo zvinogadzirwa nemamwe marudzi eglue
Inokodzera mhando dzakasiyana dzebepa chubhu, pepa chubhu yekugadzira tambo, inoshandiswa kugadzirwa kwemakemikari fiber, bepa, plastiki, kurongedza, machira, kudhinda uye kudhaya maindasitiri akadai sepepa chubhu, pepa musimboti, bepa chubhu, bepa rinogona.
Inokodzera kugadzira mhando dzese dzemapepa ekuchengetedza bhodhi, huchi hwebepa kiyi, bepa tireyi uye imwe yekugadzira mitsara.
Pashure: Yakazara Glue / Super SBS Zvese-chinangwa General Adhesive Glue
Zvadaro: S168 Silicone Sealant Weather-resistant Adhesive Construction Weather-resistant seal yemadziro ekunze, matenga, madhoo nemahwindo
Universal Glue / Super SBS Zvese-chinangwa General Ad ...